Waa maxay faa'iidooyinka CBD Edibles? • Daroogada Inc.eu
Waa maxay faa'iidooyinka cuntada la cuno ee CBD?
Cannabidiol (CBD) waa kaabis caafimaad oo dabiici ah oo dadka ka caawin karta inay xanuunka iska yareeyaan, yareeyaan walbahaarka iyo welwelka, ayna hagaajiyaan tayada hurdada. Waxay noqon kartaa dawo kale haddii daawooyin kale - oo joogto ah - aysan shaqayn. Mid ka mid ah noocyada ugu caansan ee alaabada CBD, waa edibles.
CBD qaab ahaan, tusaale ahaan, shukulaatada, caloosha iyo buskudka. Waa maxay sababta cunnooyinka loo jecel yahay iyo maxay yihiin faa'iidooyinka marka la barbar dhigo saliidda CBD, uumiga ama maadooyin? Waa kuwan saddexda faa iido ee ugu waaweyn.
1 Saamaynta Waarta
2 Dhadhan iyo wejiyo badan
3 Gargaarka Caafimaadka
Mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu weyn ee Cuntooyinka CBD waa in ay leeyihiin siidayn tartiib ah oo saameyntu ay sii dheeraato. Siideynta CBD waa mid tartiib tartiib ah walxaha ayaa haddaba si joogto ah loo sii daayaa. Dad badan ayaa tan la kulma sida wax lagu farxo. Dabcan, tani waxay sidoo kale kuxirantahay dulqaadka shaqsiyeed ee CBD iyo tayada alaabada. Markay CBD ku jirto cuntada, saameyntu waxay socon kartaa sideed ilaa toban saacadood. Saamaynta qaadashada saliidda cbd ama iyada adhiga CBD caadi ahaan waxay qaadataa qiyaastii afar ilaa lix saacadood.
Dhadhan iyo wejiyo badan
Faa'iidada kale ee qaadashada cuntooyinka la cuno ayaa ah inay yihiin kuwo aad u kala duwan. Qof kastaa ma jecla dhadhanka saliidda CBD ee dabiiciga ah. Midkani wuxuu noqon karaa mid qadhaadh. Qof kastaa ma jecla sigaar cabidda ama vape. Si kastaba ha noqotee, marka maadadan firfircoon lagu daro cuntada, dadka badankoodu aad bay u qaddariyaan. Nacnaca, cirridka iyo shukulaatada ayaa ah cuntooyinka ugu badan, laakiin CBD waxaa kaloo loo isticmaali karaa alaabta la dubay, jajabka, farmaajada ama labiska salad.
Marka lagu daro faa'iidooyinka guud ee alaabada CBD ay bixin karto, soosaarka serotonin sidoo kale waa la hagaajin karaa. Isticmaalka cuntada la cuno waxay inta badan saamayn xooggan ku yeelataa niyadda, tayada hurdada iyo yaraynta lalabada marka loo eego sigaarka ama uumiga. Cuntooyinka la cuni karo ayaa sidoo kale aad loogu heli karaa dadka bilowga ah. Ku billow cirridka iyo nacnacyada cbd -ka yar maadaama tani ay fududeyneyso in la xakameeyo qiyaasta.
Akhri wax dheeraad ah greenprophet.com (Source, EN)
Talooyinka cusub ee CBD ee ay soo jeedisay NIHC
Golaha Hemp-ka Warshadaha Qaranka (NIHC) wuxuu dhowaan talooyin u soo jeediyay Maamulka Cuntada iyo Dawada ...
Faafida weli ma dhammaan oo waxaan wali u baahanahay inaan aad uga taxaddarno.…